Madaxweyne Farmaajo oo sababa jira aawadeed u soo gabagabeey safarkiisii Sharma Al Sheekh – Somali Top News
Madaxweyne Farmaajo oo sababa jira aawadeed u soo gabagabeey safarkiisii Sharma Al Sheekh
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dalka dib ugu soo laabtay kaddib ka qayb-galkiisii Shir Madaxeedka dalalka Jaamacadda Carabta iyo Midowga Yurub oo maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Sharm El-Sheikh ee dalka Masar.
Shirka Madaxeedka dalalka Jaamacadda Carabta iyo Midowga Yurub ee sannadkan waxa lagu lafo-guray arrimaha ay wadaagaan labada dhinac iyo xal-u-helidda dhibaatooyinka tahriibka, xasilooni darrada iyo isbeddelka cimilada.
Madaxweyne Farmaajo oo Shirka Khudbad ka jeediyay ayaa bogaadiyay qabsoomidda shirka isaga oo xusay in iskaashiga dalalka Jaamacadda Carabta iyo Midowga Yurub uu muhiim u yahay xallinta caqabadaha horyaalla labada dhinac oo u baahan wadashaqayn iyo iskaashi miradhal ah.
Madaxweynaha ayaa intii aanu ka soo ambabixin magaalada Sharm El-Sheikh waxa uu saaka la kulmay Ra’iisul Wasaaraha Dalka Denmark Mudane Lars Rasmussen, iyaga oo ka wada hadlay xiriirka labada dal iyo sidii Denmark u maalgashan lahayd Soomaaliya, sarena ugu qaadi lahayd taageerada ay siiso Dowladda Federaalka.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale intii uu ku sugnaa magaalada Sharm El-Sheikh shir doceedyo la yeeshay madaxda dalalka Ciraaq, Talyaaniga iyo Sweden, isaga oo kala hadlay inay dowladda Federaalka Soomaaliya ku garab istaagaan dib-u-dhiska Ciidamada Qalabka sida iyo dadaalka ay dowladdu ugu jirto in deynta laga cafiyo.
Sababaha uu Muqdisho ugu soo laabtay waxaa kamid ah Ra’isul Wasaare Kheyre oo bilaabay ololaha musharaxnimo ee doorashada 2020 iyo dilal kala duwan oo ka dhacay Muqdisho iyo gobolada dalka.
← Howlgal qorsheysan oo lagu dilay in kabadan 30 katirsan Al shabaab
Shir looga hadlay xulashada Hannaanka Federaalaynta Maaliyadda oo Muqdisho lagu qabtay →
Xildhibaan Sheegay in Madaxweynaha Hirshabelle Uu Ka Hor Yimid Dagaal ka Dhan Ah Al Shabaab
Golaha Wasiirrada Xukuumadda Federalka Somaaliya Oo Ansixiyay Hindise Sharciyeedka Hey’adaha Dadka Naafada Ah